Redream: a Dreamcast emulator ine Linux rutsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Redream: a Dreamcast emulator ine Linux rutsigiro
Kana iwe uri mudiwa wekare Dreamcast mutambo kunyaradzwa urikuda nhau idzi. Sezvo pane boka revashanduri rinotarisira kusimudzira Tsvuku, emulator yeiyo Dreamcast inoenderana neayo makuru mapuratifomu, ndokuti, Windows, Mac uye Linux. Nayo iwe unozokwanisa kumutsa akanakisa emavhidhiyo mitambo yeiyo Dreamcast mune yakakwira tsananguro pakombuta yako, chimwe chinhu icho vazhinji vatambi murudo nemhando dzekare yemitambo yemavhidhiyo uye iyi mhando yetro michina inonyatso kuda.
Kana iwe uchida know more nezve chirongwa ichi, unogona kushanyira iyo website yepamutemo. Ikoko iwe unowana yakawanda ruzivo nezvazvo, sekuenderana, magwara ekutanga kuishandisa, changelog kuti urambe uchiziva nezvose nhau uye shanduko, uyezve nzvimbo yekurodha. Kana iwe ukasvika munzvimbo iyoyo uchaona mikana miviri, yemahara inonzi Lite inoenderana ne80% yemaraibhurari eDreamcast, asi isina rutsigiro rwekutsanangurwa kwakakwirira kududzira. Kune rimwe divi, kana iwe uchida kutamba neHD unofanirwa kusarudza iyo Premium vhezheni iyo inodhura chete $ 5. NaRedream iwe unogona kuve neakanaka Dreamcast emulator inotsigira irwo runoshamisa runyorwa rwezita remazita iwe aunogona kumhanya. Kana iwe uchida kuona iyo rondedzero ye inoenderana mitambo yemavhidhiyo iwe uchakwanisa kutarisa Iyi link, asi kubva kuLxA isu tatozivisa iwe kuti kune anopfuura mazana mashanu emitambo uye 500 chete yeiyo runyorwa izvozvi pasina rutsigiro (Broken). Uye zvakare, sekuratidzira kwayakaitwa naAnthony Pesch pachake, neRedream haugone kuwana emulator yeDreamcast senge dzimwe nzira dziripo ...
Imwe yemakakatanwa makuru anomira pachena ndeyekuti emulator iri mushandisi-inoshamwaridzika, yakagadziridzwa uye inowanikwa kumhanya chero chaunoda. Iyo zvakare multiplatform sezvatakambotaura pakutanga, uye yave nayo zvinonakidza maficha senge HLE BIOS, otomatiki dhizaini kumisikidza, nyore graphical interface, uye iro rakakosha vhidhiyo yemitambo dhatabhesi mukuwedzera kuwedzeredza kuti urege kuneta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Redream: a Dreamcast emulator ine Linux rutsigiro
Seimwe nzira pane zvakare iyo Reicast musimboti muRetroarch, iyo ivo vange vachipa yakawanda nguva pfupi yapfuura uye ichivandudza nekukurumidza.
Pyzo: muchinjiko-chikuva chakabatanidzwa budiriro nharaunda yePython
Project LiveSlak: Mhanya Mhenyu Mifananidzo kubva kuSlackare